Tatoazy misy fehezan-teny, teny mandrakizay eo amin'ny hoditrao. Ny fanaovana tatoazy
Nat Cerezo | | Tattoos misy litera
ny tombokavatsa misy andian-tenyNa dia tsotra aza ny ankamaroany, dia mety ho an'ireo te hanana teny manokana handravahana ny hodiny izy ireo. Noho izany, azo atao ny manana andian-teny amin'ny fiteny hafa na manokana ho antsika izay azontsika vakiana na aiza na aiza misy antsika ...
ny tombokavatsa misy andian-teny Manome tantara maro izy ireo ary, tsara tanterahina, mahafinaritra izy ireo. Ny tsiambaratelo ho an'ity karazana tatoazy ity dia hivoaka tsara? Hitantsika ery ambany io!
1 Misafidiana andianteny iray ho an'ny taranany
2 Ny tatoazy fehezanteny tsara tarehy indrindra
Misafidiana andianteny iray ho an'ny taranany
Ny iray amin'ireo tsiambaratelon'ny tatoazy andian-teny dia ny mahazo ny fehezanteny tonga lafatra amin'ny tatoazy. Ohatra, ho an'ny sakaizan'ny sakaiza iray, ny fehezanteny tonga lafatra dia ny fanaovana tatoazy "aza adino ny pickles" amin'ny sorony satria hadinony foana izany rehefa nankany amin'ny supermarket izy.
Na izany aza, raha tsy te ho be prosaic ianao ary maniry zavatra lalina kokoa, dia mandehana ho an'ny kilasika. Ary tsarovy fa ny lehilahy (na vehivavy) dia tsy miaina irery amin'i Shakespeare. Azonao atao ny manovo aingam-panahy avy amin'ireo manam-pahaizana mahatalanjona maro hafa sy asa hafa ankoatry ny Bardo (na tsy mety maty sy manam-pahaizana toa inona aza izy dia samy mitodika any aminy daholo ny tsirairay).
Ohatra, ao amin'ny fianakaviako dia mandeha ny angano fa ny razamben'ny renibeko, izay Scottish, dia nanisy tombokavatsa ny fehezanteny voalohany an'ny Odyssey (“Lazao amiko, Musa, ny tantaran'ilay lehilahy maro lalana”) Miaraka amin'ny tady fanaovana voay satria noraran'izy ireo tsy ho any an-dranomasina toy ny rahalahiny hafa izy.
Ny tatoazy fehezanteny tsara tarehy indrindra
Tsy ampirisihina ianao hanao zavatra toa an'i Bebe ary handrava ny tananao amin'ny fijaliana sy ny ranomainty. Betsaka ny matihanina afaka manampy anao hisafidy fomba iray mifanaraka amin'ny famolavolana tatoazy farany anao.
Ohatra, tsy dia malaza loatra izao calligraphy Gothic izao, fa manana endritsoratra an'arivony azonao isafidianana. Na ny maka tahaka ny sora-tanana na ny milina fanoratana miantso anao bebe kokoa, ny andianteny nofidinao im-betsaka dia hamaritra ny endrika farany an'ny tatoazy.
Manantena izahay fa ireo tatoazy andian-teny ireo dia nanome aingam-panahy anao. Lazao aminay, manana tatoazy voasoratra toa izao ve ianao? Andian-teny inona no nofidinao? Midika inona izany ho anao? Aza adino fa afaka milaza aminay izay rehetra tadiavinao ianao, mila mamela hevitra fotsiny izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoos misy litera » Tatoazy misy fehezan-teny, teny mandrakizay eo amin'ny hoditrao
Tatoazy an-dranomasina, finoanoam-poana taloha